Xog: Dagaal Culus oo Caawa ka dhacay Degmadda Afgooye, Qaabkuu u dhacay Dagaalkaasi,? – Hornafrik Media Network
Xog: Dagaal Culus oo Caawa ka dhacay Degmadda Afgooye, Qaabkuu u dhacay Dagaalkaasi,?
By HornAfrik	 On Jul 29, 2017
Maleeshiyaad Shabaab ayaa Caawa weeraray Saldhigyo ay Ciidamada Dowladda Soomaaliya ku leeyihiin duleedka degmada Afgooye ee gobalka Shabeelaha Hoose. iyadoona Weerarkaasi uu ka dhashay qasaaro Dhimasho iyo Dhaawacba leh oo soo kala gaaray Dhinacyadda dagaalamay.
Dadka Deegaanka ayaa u sheegay Hornafrin in Dagaalku uu socday in ka badan 40 Daqiiqo, Isla markaana ay iswaydaarsanayeen Dhinacyadda dagaalamayay Hubka Fudud iyo kan Culus.
Xog ay heshay Hornafrik waxay sheegaysaa in Maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay isticmaalayeen Gaari Nooca Dadwaynaha ah oo ay Soomaalidu u taqaan Caasiga, kadibna Ciidanka Dawladda oo Lacag Isbaaro ah ka qaata Gaadiidka ay sidii caadada ahayd doonayeen inay wax ka qaataan, balse mar qura ay ka war heleen Gaarigii oo ay ka daateen Maleeshiyaad Hubaysan oo rasaas dhinac walba u furay. iyagoona halkaasi ku dilay 4 Askari oo doonaysay inay Gaariga Lacag ka qaataan.
kadibna iska horimaad u dhaxeeya Ciidankii Saldhigaasi joogay iyo Maleeshiyaadka Alshabaab ayaa halkaasi ka billowday, Waxaana dhinaca Alshabaab-ka ay ka tageen mid ka mida Maydadka Maleeshiyaadkooda, iyadoo sidoo kale la arkayay aagaga ay ka dagaalamayeen oo Dhiig badan daadsan yahay, taasoo muujinaysa in khasaare intaas ka badan uu gaaray.
Taliska Ciidanka Xoogga iyo Alshabaab midkoodna faaf faahin kama bixin wixii dhacay. Waxaase hadda ay Xaaladdu u muuqataa mid dagan, iyadoona Ciidamadda Dawladda oo markii hore dib uga gurtay Saldhigooda ay goobta ku soo laabteen.
sidoo kale waxaa wali xiran Isu Socodka Gaadiidka iyo Dadka ee wadadaasi isticmaali jiray, iyadoona Ciidamadda ay diideen in loo soo dhawaado. Waxayna Baabuurta Dadwaynaha meel fog uga ridayaan Rasaas.
Xog: Taliye Ciidan oo la filayo in Shaqada laga eryo, Maxay tahay Sababtu,?
Xog: Shariif Xasan oo isku shaandhayn ku samaynaya Golahiisa Wasiiradda.